We Fight We Win. -- " More than Media ": မိုးသီးဇွန် ရန်ကုန်ရောက်ပြီ
He just wanted his land back in Yangon unfortunately ADSDF surrender today to military gov. Is it coincidence?
လချီးကောင်၊ လေတလုံး မိုးတလုံး နဲ့ ခရိုနီ လေယာဉ် စီးပြန်တယ်။
5 August 2013 at 16:46
He doesnt have to wear coat.